Demonology Warlock amin'ny ady ho an'i Azeroth | Ady ho an'i Azeroth, Warlocks, Vaovao | WoW Guides | WoW Guides
Demonology Warlock amin'ny ady ho an'i Azeroth
Adrian Da Cuna | | Ady ho an'i Aterota, mpamosavy, About us
Aloha! Izahay dia mitondra anao ny fanovana talenta, fahaiza-manao ary talenta fanomezam-boninahitra homen'ny Warlock Demonolojia ao Battle for Azeroth.
1 Demonology Warlock amin'ny ady ho an'i Azeroth
fijinjana-panahy: Mampitombo ny voka-dratsin'ny biby fiompy sy ny biby fiompinao 20%. Maharitra 12 seg, nitombo 4 sec isaky ny lasibatra voakasiky ny Doom anao, hatramin'ny 36 sec fara fahakeliny.
fahatezerana aloka: Mampandeha ny fahavalo rehetra ao anatin'ny 8 metatra mandritra ny 4 seg.
famoahana demonia: Manovoza angovo avy amin'ireo demonianao ary atsipazo bolan'ny herin'ny demonia amin'ilay kendrena ianao, miatrika (125% ny herin'ny tsipelina) fahasimbana. Fanimbana korontana. Ny fahasimbana dia nitombo 10% isaky ny Demony nampiasanao. Miteraha Shard fanahy 1.
grimoire-of-supremacy: Azonao atao ny mitazona ny demonia mbola lehibe kokoa mandritra ny fotoana tsy voafetra, mamela anao hiantso mpiambina apokaliptika na infernal ho biby fiompy maharitra.
famonoana tanana: Ny tanan'i Gul'dan izao dia mampihatra Doom amin'ny fahavalo rehetra tratrany ihany.
tsy ho ela: Lozam-pifamoivoizana no resahina ao amin'ny Doom 3 segondra haingana ary miantso ny 1 Imp Imp rehefa miatrika fahasimbana.
dia mitambotsotra: Ny herin'ny demonia dia mitaona ny wild Imps anao rehetra mankany amin'ilay kendrena, avy eo mahatonga azy ireo hipoaka mahery vaika noho ny fahasimbana (230% amin'ny herin'ny Spell). Ny fahasimban'ny Shadowflame amin'ireo fahavalo rehetra ao anatin'ny 8 metatra.
terrachadores-nohatsaraina: Miantso terrachadores izao koa dia miantso ny 2 Wild Imp.
fampitomboana herinaratra: Ny Demower Empowerment dia manana vahana 65% hiteraka Soul Shard 1 rehefa ampiasaina mandritra ny ady.
lelafo-of-the-shadows: Mandrotsaka baolina Shadow Flame amin'ny lasibatra, manimba (110% ny herin'ny tsipelina) fahasimbana. Simba ny Shadowflame avy hatrany sy ny hafa (154% ny herin'ny Spell). Ny fahasimban'ny Shadowflame mihoatra ny 8 seg. Miorina hatramin'ny in-3 izy. Miteraha Kely Fanahy 1.
alahelo-aingam-panahy: Ny Fananarana demonia dia mahatonga ny Shadow Bolt ho avy eo ho eo koa.
fiantsoana-maizina-fijery: Manomeza fijery maizimaizina mandritra ny 12 seg izay mandefa ny Lasera Maso amin'ny lasibatra rehetra voakasiky ny Doom anao, mifampiraharaha (110% amin'ny herin'ny tsipelina) amin'izy ireo. Simba ny aloka.
Portal Nether: Manokatra vavahady mankany amin'ny Twisting Nether mandritra ny 20 seg. Isaky ny mandany Soul Fragments ianao, dia handidy demonia hivoaka amin'ny Void ka hiady eo akaikinao koa.
loza: Mampihorohoro ny tanjona kendrena amin'ny fandringanana efa antomotra, ny fifampiraharahana (250% ny herin'ny ody) Simba ny aloka aorian'ny 30 seg.
fikomiana: Mandidy ny Felguard anao hitokona amin'ny fanahin'ny fahavalony, mifampiraharaha (100% amin'ny herin'ny fanafihana) p. Simba ny aloka. Miteraha Shard fanahy 1.
dreadlocks: Rehefa miampanga ny Treachers anao, Terror Bite izao dia mahatratra ny lasibatra rehetra ao anatin'ny 8, miatrika fahasimbana 25% bebe kokoa.
miantso-vilefiend: Miantso Vile Fiend hiady eo anilanao mandritra ny 15 segondra.
hery-siphon: Sorona avy hatrany hatramin'ny 2 Wild Imps hamoahana fiampangana 2 amin'ny Demon Core.
baomba baomba bilescourge: Manokatra vavahady mankamin'ny lavaka mangitsokitsoka amin'ny toerana voafantina izay hivoahan'ny karavasy maro, nianjera tamin'ny tany nandritra ny 6, nifampiraharaha (15% ny herin'ny Spell). Ny fahasimban'ny aloka amin'ireo fahavalo rehetra ao anatin'ny 10 metatra.
hery-demonia: Atsofohy amin'ny herin'ny demonia ny Fel Guard anao, mandidy azy ireo hitaky ny tanjonao ary hamoaka Fel Storm izay mahatratra 400% fahasimbana bebe kokoa.
fanahy natao sorona: Ny Soul Shard tsirairay avy dia nampitombo ny fahasimban'ny Shadow Bolt sy ny Demon Bolt 5% mandritra ny 10 seg, mitombo hatramin'ny in-5.
avy amin'ny-aloka: Ny Casting Call Terrashers dia mahatonga ny tanjona hampihena 20% ny fahasimban'ny Shadow Flame mandritra ny 12 seg.
demonia-fanjifana: Ny Demon Tyrant-nao izao dia manimba sy mifoka ny hery sisa tavela amin'ireo wild Imps anao mba hanomezana hery ny tenany.
demonia anaty: Miantso ny Imp Imp mba hiady eo anilanao mandritra ny 10 segondra, ary manana 10% vintana ianao hiantso Demon fanampiny hiady eo anilanao mandritra ny 15 segondra.
vavahady ambany: Manokatra vavahady mankany amin'ny Twisting Nether mandritra ny 20 seg. Isaky ny mandany Soul Shards ianao dia handidy demonia hivoaka amin'ny Void ary hiady aminao koa.
fahatezerana aloka: Nifindra tamin'ny sampana 45 ka hatramin'ny 75. 30 s1 min mampiasa indray. Mampitsangana ny fahavalo rehetra ao anatin'ny 8 metatra ho an'ny 43 seg.
antso demonia: Shadow Bolt ary ny fivoahan'ny demonia manana vintana 20% —Ary ny Demony tezitra 5% isaky ny lasibatra dia tratra— raha te hanao ny Call Terror Shakers anao manaraka dia tsy mandany Soul Shards tsy manana fotoana fandefasana akory.
fantsom-panahy: Nifindra tamin'ny sampana 100 ka hatramin'ny 90. Ny sombim-panahy rehetra laninao dia misy a 20%15% mety hamerenana amin'ny laoniny.
fahefana-demonia: Manome hery ny demonianao miasa amin'ny angovo maizina, mampitombo ny fahamaimaizany 50% ary ny fahasalamany 20% mandritra ny 12 seg.
demonia-fahatezerana: Mampihetsi-po ny demonianao amin'ny herin'ny demonia, manome [3 * (34.5% ny herin'ny tsipelina) p. Ny fahasimban'ny aloka amin'ireo fahavalo rehetra ao anatin'ny 10 metatra miala amin'ny devolanao mandritra ny 3 seg. Azo alefa amin'ny diany izao. Ny fahasimban'ny Demonic Wrath dia manana vintana 15% hiteraka Soul Shard 1.
imp-swarm: Fiantsoana 5 Imps Biby hiady aminao.
miantso-demonia-masiaka: Miantso mpampijaly demonia mba hampitombo ny faharetan'ny demonianao ankehitriny amin'ny 15 seg sy hampitombo ny fahasimban'ny demonia hafao amin'ny 15%, ankoatry ny fandefasana Shadow Bolt amin'ireo fahavalonao.
demonia-fototra: Rehefa mampiasa ny herin'izy ireo tanteraka ny Wild Imps anao dia manana 10% vintana ianao handraisana ny ain'ny Fiainany, manome anao setrin'ny Demon Core. Rehefa lany ny Treachers nantsoinao, dia manana 100% ny fahafaham-po ny Fiainany, manome anao setrin'ny Demon Core. Demon Core dia mampihena ny fotoana filatsahan'ny Demon Bolt amin'ny 100%. Maximum of 4 stack.
demôtôm: Mandidy ny fanahy mirehitra demonia lavo hanafika ny fahavalo, mifampiraharaha (90% amin'ny herin'ny tsipelina) p. Fahasimban'ny Shadowflame. Spawn fanahy fanahy 2.
fampidiran-dra: Azo idirana amin'ny specialisations rehetra. Cooldown 30 faharoa. Fiampangana 3. Mamerina ny 30% amin'ny mana faratampony anaoManome sombin'aina 1, amin'ny vidiny iray 10%15% ny fahasalamanao farany ambony.
tompo-tompo-demonia: Fanomezana demonia koa mampitombo ny fahasimban'ny demonianao 14.4%.
call-terrachadores: 1520 sek hampiasa indray. Terrasera mahery setra 2 hanafika ny lasibatra mandritra ny 12 seg.
manala fiainana: Vidin'ny 0% ny base mana plus 3%1% isan-tsegondra. Mamono ny fiainana amin'ny lasibatra, mampiditra 6. Ny fahasimban'ny aloka mihoatra ny 6 seg ary manasitrana anao amin'ny 600% amin'ireo fahasimbana nosedraina.
tanana-of-guldan: Vidin'ny 0% ny base mana plus 3%1% isan-tsegondra. Miantso meteor demoniaka feno imps wild izay manafika ny lasibatra mandritra ny 12 seg. Mampiditra ny fara-tampony [43 * (25% ny herin'ny tsipelina)] p. Ny fahasimban'ny Shadowflame amin'ny fiantraikany amin'ireo fahavalo rehetra ao anatin'ny 8 metatra miala ny kendrena ary miantso hatramin'ny 43 Wild Imps, miorina amin'ny Soul Fragments lany.
alokaloka: 6%2% base mana. Mandefa volley aloky ny fahavalo, miatrika (160%50% ny herin'ny tsipelina) p. Simba ny aloka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: WoW Guides » About us » Demonology Warlock amin'ny ady ho an'i Azeroth
Warlock fandringanana amin'ny ady ho an'i Azeroth
Mpanefy vy amin'ny ady ho an'i Azeroth